Idiesel pellet yokwenza umatshini wentengiso yexabiso eliphantsi le-pellet yenza ukutya kwepellet
Ubungakanani bokugqibela bepellet:2~ 8mm
Isetyenziselwe:Ukwenza inkukhu,idada,umvundla,ibhokhwe,ukutya kwenkomo
Iimpahla ezingekasilwa:Umbona, iimbotyi zesoya njl njl
Umatshini wedizili wokwenza idizili wamkela uyilo lwendlu yokufa,Owona matshini ulungileyo wenza ipellet yokwenza abantu abafuna ukonga iindleko ekwenzeni i-pellets yokondla okanye abanakho ukufikelela ngokulula kombane apho bavelisa i-pellets, umzekelo, kwiifama zabo. Le dizeli ye-delle pellet ithengiswa ngokushushu ngeepellets ezenziwe ekhaya. Ubungakanani bayo obuncinci kunye ne-injini yedizili kuyenza ukuba ishukume kwaye ilungele kakhulu ukujikeleza. Amacandelo aphambili omatshini kukufa okucaba kunye ne-pellet roller. Ngelixa i-pelletizing, Izinto ezilungisiweyo ezilungiselelwe kakuhle ziwela kwindawo phakathi kwepellet die kunye ne-roller. Ke uxinzelelo phakathi kwesofa kunye ne-roller luya kuxinzelela izinto ngokusebenzisa imingxunya yokufa. Ke, kwelinye icala lokufa elisicaba, Iipellets ezixineneyo zokutya ziya kukhutshwa kwaye zinqunywe kubude obungaphambi kokumiselwa kwaye emva koko ziwe kumatshini wokugaya wepellet..
Kutheni sikhetha umatshini wokwenza idizili ?
Okokuqala ,le dizeli ye-delle pellet iyakwazi ukwenza i-pellets zokutya ezivela kwizinto ezahlukeneyo eziluhlaza: ingca yokudla okuziinkozo, idlelo, umququ wengqolowa, irayisi, iimbotyi, igobolondo,iindawo zokuhlala ezolimo kunye nenkunkuma yehlathi njl.
Okwesibini, ingayicombulula ingxaki yakho yokunqongophala kombane ngelixa ugcina imveliso enye. Ayizizo zonke iindawo ezinokufumana umbane, ngakumbi emasimini okanye kwiifama zasemaphandleni. Kodwa oku kungqubana akunakusinqanda kwimveliso yokuhambisa iipellets.Lo matshini wokwenza izixhobo uqhutywa ngenjini yedizili kwaye lukhetho olufanelekileyo kwindawo apho umbane ungafumaneki khona., kuyabiza, ayifumaneki okanye ayongxaki ekusebenziseni.
Okwesithathu,Lo matshini uyakwazi ukunyanzela iipellets zokutya nge diameter ezahlukeneyo (ihlala isuka kwi-2mm ukuya kwi-8mm) kunye nobude ngeemodeli ezahlukeneyo zobubanzi be-pore kunye neendlela ezahlukeneyo zokunyanzelwa. I-mills eguqulweyo yokufa kunye ne-roller-Turn dizeli yenziwa ngentsimbi ekumgangatho ophezulu., kwaye ubomi babo benkonzo bungaphezulu 800 iiyure.
Isine,njengezinye iimayile ezifa, le mill ye-pellet ikonwabela izibonelelo zobungakanani obuncinci,uyilo olulula,ulungelelwaniso, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza okulula, ulondolozo oluncinci, ingxolo ephantsi, kunye nobomi benkonzo ende.Umatshini owenza idizili wenza ubungakanani bokubumbana, ke ungabeka naphi na apho ufuna khona. kukwinkcitho-mali, kuba isebenzisa ioyile yedizili enexabiso eliphantsi.
Iimpawu zedizili yedizili
1.Umatshini wokutya we-VICTOR, Inkqubo yemveliso koomatshini ngokwayo phantsi koxinzelelo lokwenza ukutya kwepellet, Ilungele ukutya kwehagu, iinkomo, igusha, Iintonga zokuqunjelwa, ukuphucuka kokufikeleleka kokutya, yandisa ukutyeba kwezilwanyana.
2.Diesel pellet mill ukwenza lula ukondla, Ukusetyenziswa okuphezulu, Kulula ukulawula isixa sokondla, ukondla okondlayo, icocekile kwaye icocekile.
3.Idiesel feed pellet yokwenza umatshini ukwenza inkqubo yokuqulunqa izinhlayiyana yenza iinkozo, i-legume trypsin boycott factor degeneration, ukunciphisa iziphumo ezibi kukugaya, ingabulala amaqanda eparasite kunye nezinye i-pathogenic microorganisms, ukunciphisa iintlobo ezahlukeneyo zezifo ezihlaselayo kunye nezifo zenkqubo yokugaya ukutya.
Iiparamitha zobugcisa zeDiesel Pellet Mill
Ukusebenza kwevidiyo yemigodi yokutya kwepellet